Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.4.2 PhotoCity
Mawebhusayithi akaita seFlickr uye Facebook anobvumira vanhu kugovana mifananidzo neshamwari dzavo nemhuri, uye vanoitawo zvirongwa zvakawanda zvemifananidzo zvinogona kushandiswa kune zvimwe zvinangwa. Semuenzaniso, Sameer Agarwal nevamwe vashandi (2011) vakaedza kushandisa mapikicha aya kuti "Vaka Roma muzuva" nekudzokorora mifananidzo 150 000 yeRome kuumba 3D kuvakazve kweguta racho. Kune dzimwe dzimba dzakawanda dzakapoteredzwa-zvakadai seColiseum (mufananidzo 5.10) -vatsvakurudzi vakanga vakabudirira zvishoma, asi kuvakwa kwakatambudzwa nekuti mifananidzo yakawanda yakatorwa kubva kune imwecheteyo maonero, ichisiya zvikamu zvezvivako unphotographed. Nokudaro, zvifananidzo kubva mufananidzo zvekufambisa hazvina kukwana. Asi zvakadini kana vazvipiri vaigona kukanyorerwa kuti vawane mapepa anodiwa kuti vagadzire avo vatovapo? Kufungidzira kumashure kufananidzi zvakafanana muchitsauko 1, zvakadini kana mifananidzo yakagadzirirwa ichigona kugadziriswa nemifananidzo yekuchengetedzwa?
Mufananidzo 5.10: Kugadziriswa kweD 3D kweCalliseum kubva pane imwe huru yemifananidzo 2D kubva purojekiti "kuvaka Rome muzuva." Zvitatu izvi zvinomiririra nzvimbo kubva pamifananidzo yacho. Yakadzorerwa nemvumo kubva ku html version Agarwal et al. (2011) .
Kuti zvibatsire zvakananga kuunganidzwa kwezvizhinji zvemifananidzo, Kathleen Tuite uye vashandi pamwe chete vakagadzira PhotoCity, mutambo wekugadzira mifananidzo. PhotoCity yakashandura basa raive rakaoma rekuunganidza deta-kuisa mapikicha-kuita basa rekuita semutambo rinosanganisira mapoka, nhare, uye mareza (mufananidzo 5.11), uye yakatanga kushandiswa kugadzirazve 3D kuvakazve vunivhesiti mbiri: Cornell University neYunivhesiti of Washington. Vatsvakurudzi vakatanga nzira kuburikidza nekuisa mbeu dzezvizvarwa kubva kune dzimwe zvivako. Zvadaro, vatambi vari pamusasa mumwe nomumwe vakaongorora huripo huripo hwekuvakazve uye hunowana humwe huwandu nekuisa mifananidzo yakavandudza kuvaka. Somuenzaniso, kana kugadziriswa kweUris Library (kuC Cornell) ikozvino kwakanyanyisa, mutambi anogona kuwana mapeji nekuisa mifananidzo mitsva yacho. Zvinhu zviviri zvekugadzirisa izvi zvakakosha zvikuru. Chokutanga, nhamba yehunoti mutambi anogamuchira yaive yakaenderana nemari iyo mufananidzo wavo wakawedzerwa kuvakazve. Chechipiri, mapikicha ainge aiswa aifanira kupindirana nekwakagadzirwa patsva kuitira kuti agone kuvimbiswa. Pakupedzisira, vatsvakurudzi vakakwanisa kugadzira mienzaniso yakareba ye 3D yezvivako pamasasa maviri (mufananidzo 5.12).
Mufananidzo 5.11: PhotoCity yakashandura basa rakaoma rekuunganidza dhidhi (kureva, kuisa mapikicha) uye kuishandura kuva mutsara. Yakadzorerwa nemvumo kubva ku Tuite et al. (2011) , chidzidzo 2.
Mufananidzo 5.12: Mutambo weChotoCity wakabvumira vatsvakurudzi nevatori vechikamu kuti vape mararamiro akakwirira eDzimba dzezvivako vachishandisa zvifananidzo zvakakonzerwa nevatori vechikamu. Yakadzorerwa nemvumo kubva ku Tuite et al. (2011) , chidzidzo 8.
Kugadzirwa kweChotoCity kwakagadzirisa matambudziko maviri anowanzomuka mukuparadzira data yekuunganidza: data kugadzirisa uye sampling. Chokutanga, mapikicha akavimbiswa nokuzvienzanisa nemifananidzo yakapfuura, iyo yakazofananidzwa nemifananidzo yapfuura yose kudzokera kumifananidzo yemichero yakasirwa nevatsvakurudzi. Mune mamwe mazwi, nekuda kweiyo yakagadzirwa-in redundancy, zvakanga zvakaoma kuti mumwe munhu aise chinyorwa chekuvaka kwakashata, zvichida nekukanganisa kana nechinangwa. Izvi zvakagadziriswa zvinoreva kuti chirongwa chacho chakazvidzivirira pachedu pane zvakashata data. Chechipiri, zvikwata zvinodzidziswa nevakawanda zvakadzidziswa kuti vawane zvakakosha zvikuru-kwete zvakanyanya-data. Zvechokwadi, hezvino mamwe emiganho iyo vatambi vakatsanangurwa vachishandisa kuti vawane mamwe mapepa, izvo zvakaenzana nekuunganidza mamwe mashoko anokosha (Tuite et al. 2011) :
Aya mazwi anoratidza kuti apo vatori vechikamu vanopiwa mhinduro dzakakodzera, vanogona kuva nyanzvi chaiyo yekuunganidza dhiyabhorosi inofarira kune vanotsvakurudza.
Kakawanda, chirongwa chePhotoCity chinoratidza kuti sampuli uye huwandu hwedunhu haisi matambudziko asingakundiki mukuparadzirwa kwemashoko akaparadzirwa. Zvakare, zvinoratidza kuti kuparadzira dhijekiti yekuunganidza dambudziko hakusi kwezvinhu izvo vanhu vari kutoita zvakadaro, sekuona shiri. Nekodzero yakarurama, vanozvipira vanogona kukurudzirwa kuita zvimwe zvinhu zvakare.